आर्मी र सुदूरपश्चिमका खेलाडीबीच मैदानमै पर्‍यो ‘फाइट’ !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
आर्मी र सुदूरपश्चिमका खेलाडीबीच मैदानमै पर्‍यो ‘फाइट’ !
राजविराज– दुई टिमका खेलाडीबीच कुटाकुट भएपछि सर्लाही भएको वाग्मतीमा भएको दोश्रो राजर्षी जनक गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबारको फाइनल खेल स्थगित भएको छ।
त्रिभुवन आर्मी क्लब र सुदूरपश्चिम ११ का बीचको फाइनल खेल अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको आयोजक वागमती युवा क्लवले जनाएको छ। वागमती मैदानमा भएको फाइनल खेलमा सुदूरपश्चिमले २–१ को अग्रता लिएको थियो। सोहि क्रममा दोस्रो हाफको ६७ मिनेटमा सुदूरपश्चिमका अफ्रिकन मूलका खेलाडी आरोनले आर्मीका पदम तामाङलाई टाउकोले छातीमा हाने। लगत्तै रेफ्री सुदीश पाण्डेले आरोनलाई रातो कार्ड देखाएका थिए। त्यसपछि खेल तनावग्रस्त बनेको थियो।
आरोनले मैदान नछोडेपछि विवाद सुरु भयो र दुवै टोलीका खेलाडीबीच झगडा तथा हात हालाहाल भएको थियो। विवादपछि दर्शक पनि मैदानमा पसेर आर्मीका खेलाडिहरुलाई कुटपिट गरे । आयोजक र स्वयम् सेवकको प्रयासपछि स्थिती साम्य भयो र आधा घण्टापछि फेरि खेल सुरु भयो ।
आर्मीका खेलाडि मैदानमा प्रवेश गर्नासाथ रेफ्री पाण्डेले आर्मीका गोलरक्षक विकेश कुथु, विकास तामाङ र दीपक गुरुङलाई तत्कालै रातो कार्ड देखाएपछि फेरी विवाद फेरि सुरु भयो । अपिल गर्न गएका आर्मीका खेलाडीलाई आयोजकले पनि रोके भने दर्शकले पनि मैदानमा प्रवेश गरी फेरी हातपात गर्न खोजे।
कमजोर सुरक्षा अवस्था तथा स्थानीय दर्शक र सुदुरपश्चिमका खेलाडी समेत हातपातमा उत्रिएको भन्दै आर्मीले खेल नखेल्ने निर्णय सुनायो । टिमले मैदान छोडेर हिडेपछि सुदुरपश्चिमका खेलाडी र दर्शकले जितको नारा लगाए। सुदुरपश्चिमका प्रशिक्षक सुरेश हमालले खेल आफुहरुले जितेको दावी गरे।
यता, दर्शकसमेत झगडामा उत्रिएकाले खेल सुचारु गर्न नसकेपछि फाइनल स्थगित गरिएको आयोजक वागमती युवा क्लबका अध्यक्ष किस्मत मैनालीले जानकारी दिएका छन्।